New Day Jobs | How To Evaluate Yourself Effectively | Career Blogs
Workplace Success Workplace Skill Personal Upgrade 14 Jul 2020
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နေ့တိုင်း ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ အဓိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေ ယုံကြည်ချက်တွေ အပြုအမူတွေနဲ့ စိတ်သဘောထားတွေကို သိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိနေဖို့ဆိုတာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ စိတ်နေသဘောထားတွေ အမူအကျင့်တွေ တုံပြန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိအောင်လုပ်တာပါ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သုံးသတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
၁။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးတွေကို သိနားလည်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ အတွေး၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေက ကိုယ့်ဘဝအတွက် အဓိကကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွေးတွေ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကနေ ခံစားချက်တွေ စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် နားလည်ပုံတွေကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းလေးတွေ ပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက အဆိုးဘက်ရောက်နေလား? ကိုယ်က မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ပဲ တွေးနေမိလား? အမြဲတမ်း တစ်ခုခုမှားတော့မယ်လို့ပဲ ထင်နေမိလား?
၂။ ခံစားချက်ကို သိပါ
ခံစားချက်တွေကနေ ကိုယ်ကဘယ်သူလဲ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ်က ဘာလို့ ဒီလိုမျိုး ပြုမူတာလဲဆိုတာကို သိနိုင်လာပါတယ်။ ကိုယ်က ပြောဆိုနေတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ ဘယ်လိုပြုမူတယ် ဘယ်လိုအသံအနေအထားနဲ့ ပြောဆိုတယ် ဘယ်လိုမျက်နှာအမူအယာနဲ့ ဘယ်လိုကိုယ်ဟန်အမူအယာရှိနေတယ်ဆိုတာကနေ ကိုယ်ရဲ့ ခံစားချက်ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်က ဘယ်လိုမျိုး ခံစားနေရပြီး ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ရဲ့ ပြောဆိုပြုမူပုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး သုံးသတ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ပေါ်လိုက်ပြီါ် ထင်မြင်ချက်တွေကလည်း ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ခုကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ ထင်မြင်ချက်တွေ အတွေးထဲရောက်လာတတ်ပါတယ်။ တခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်မြင်တွေ့လိုက်ရတာပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ ထင်မြင်ချက်ကနေ မှားယွင်းတဲ့ သုံးသတ်ချက်တွေလည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်းကို ဒိုင်ယာရီလိုမျိုး စာအုပ်ထဲမှာ ရေးတယ်ဆိုတာက ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာရယ် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကိုယ်က သေချာသိနားလည်သွားနိုင်တယ်လေ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို ရေးတာကနေ ကိုယ်သတိမထားမိလိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေ အတွေ့အကြုံတွေကို သိလာနိုင်ပြီး အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေက ကိုယ့်ဘဝပေါ်ကို ဘယ်လိုမျိုး သက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိလာနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်းကို ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် ကိုယ်ရေးထားတာလေးတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်က ဘယ်လိုအရာတွေမှာ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်နဲ့ ဘယ်အရာတွေကို ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာတွေကို သိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်ခဲ့လား ရောက်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်လိုခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်နိုင်တယ်လေ။
၅။ ကိုယ်အဓိကထားတဲ့အချက်ကို သိပါ
ကိုယ်က ဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိရင် ကိုယ့်ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ကို သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာအများစုက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေ ပြောင်းလဲမှုတွေကနေ ရရှိခဲ့တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာက ဘာမှန်းမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာဆိုတာက ဘဝမှာ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေပါပဲ။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကို သိနားလည်လာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်က ဘယ်သူလဲ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်အရာတွေက အရေးပါလဲဆိုတာကို သိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကနေ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို စဉ်းစားပြီး ကိုယ်ဘယ်လောက်အထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။
၆။ အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တာကို သတိရပါ
ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာကို သုံးသပ်ပြီးနားလည်ဖို့က အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ပြုမူတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး အနာဂတ်ဘဝက ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လေ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး နားလည်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သုံးသပ်တော့မယ်ဆိုရင် အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ အချိန်ပေးတော့မှ ကိုယ်က သေချာစဉ်းစားပြီး သုံးသပ်နိုင်မှာလေ။ အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်နိုင်တော့မှလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။